Sarkaal Iyo Askari Lagu Dilay Magaalada Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Sarkaal Iyo Askari Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
Rag hubeysan oo ka tirsan xarakada shabaabul Mujaahidiin waxay howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ku dileen sarkaal iyo askari ka tirsanaa maleeshiyaadka dowladda federaalka ee uu hoggaamiyo Farmaajo.
Howlgalkan gaarka ah waxaa fuliyay rag ka tirsan katiibada sida gaarka ah u tabobaran ee Muxamed Ibnu Maslamah waxayna ka fuliyeen waddada warshadaha ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku dileen sarkaalka iyo askariga.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay waxay xaqiijiyeen in ciidamada shabaabul Mujaahidiin ay goobta ku dileen sarkaalkan oo ka tirsanaa saraakiisha sar sare ee kooxda Ridada Soomaaliya waxaana sarkaalka lala dilay mid ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah.
Howlgalkan gaarka ah ee ka dhacay wadada warshadaha ee magaalo madaxda Soomaaliya waxa uu kusoo beegmayaa xilli maanta weerar qorsheysan oo Mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada Deyniile lagu dilay taliyihii nabadsugidda dowladda federaalka ugu magacownaa degmada Deyniile Farxaan Nuur Raage iyo 11 askari oo iyana ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda Ridada halka sidoo kalena weerarkaas lagu dhaawacay 13 askari oo murtadiin ah.